कण्डम मात्र होइन ७२ घण्टे बिक्छ बढि ! माया होईन शरिर साटासाट गर्ने (भिडियोसहित)
Home / मेरो साथी टि भी / कण्डम मात्र होइन ७२ घण्टे बिक्छ बढि ! माया होईन शरिर साटासाट गर्ने (भिडियोसहित)
कण्डम मात्र होइन ७२ घण्टे बिक्छ बढि ! माया होईन शरिर साटासाट गर्ने (भिडियोसहित) 0
पोखरा । प्रणय दिवसको औपचारिक सुरुआत सन् २६९मा रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ। रोमका तत्कालीन सम्राट् क्लोडियस द्वितीयले आफ्ना सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लगाएका थिए। सम्राट्को आदेशको उल्लङ्घन गर्दै त्यहाँका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले प्रेमका पक्षमा बोलेपछि धेरै सैनिकको उनले सार्वजनिक रुपमा विवाह गराएका थिए।
आदेश तोडेको आरोपमा उनलाई इपू ७० को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। प्रेमका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वभरि नै यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा अझै पनि खुला रुपमा प्रेमको कुरा गर्नु विपरीत लिङ्गीसँगै हिँड्नुलाई सकारात्मक रुपमा सहज रुपमा ग्रहण गरिँदैन। हेर्नुहोस पोखरामा प्रणय दिवषका दिन देखिएको बिभिन्न प्रेम जोडिहरु
आजै राजीनामा दिने अन्तिम तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री देउवा
भद्रगोलमा नदेखिएका जिग्री क्रिकेट खेल्दै यस्तो अवस्थामा भेटिए(भिडियो),